Friday March 01, 2019 - 16:54:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa aroornimadii hore ee maanta waxay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala wilaayada Helmand ee wadankaas, kaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykan ah iyo kuwa xukuumadda taagta daran ee Ka
Weerarka waxaa qaaday tobaneeyo Naftood huriyaal ah oo katirsan Imaarada islaamiga, waxayna weerareen saldhig lagu magacaabo Shawaarib, oo ah saldhig aad u weyn, kuna yaala Helmand, waxaana saldhiga degan guutooyin milliteri oo katirsan ciidamada Maraykanka.
Howlgalkan oo qeyb ka ah camaliyadda Al-khandaq ee ka socota dalka Afqaanistaan ayaa waxaa laga helayaa faafaahinno ku aadan khasaaraha gaaray ciidamada Maraykanka iyo kuwa xukuumadda Kaabul.
Ugu yaraan 40 askari oo Ameerikaan ah ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay howlgalka weli socda, halka 30 kale oo katirsan ciidamada xukuumadda Kaabul ay iyaguna dhinteen, waxaana intaas kabadan tirada dhaawacyada ciidamada Maraykanka iyo kuwa xukuumadda Kaabul. Khasaarahana marba marka dambeysa waa uu sii kordhayaa.
Ciidamada Naftood huriyaasha ah ee weeraray saldhiga Shawaarib ayaa gubay xarunta raadeerada ee saldhiga, si ay meesha uga baxdo iney isku gurmadaan ciidamada Maraykanka, waxaana marba marka ka dambeysa soo baxaya faafahinno hor leh.
Gawaarida ay ciidamada Mujaahidiinta gubeen waxay gaarayaan 30 baabuur oo noocyada kala duwan ee milliteriga ah, waxaana sidoo kale jira diyaarado ay gubeen ciidamada weerarka qaaday ee katirsan Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan.
Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan waxay sheegatay mas’uuliyadda howlgalkan ballaaran ee lagu qaaday saldhiga Shawaarib ee gobolka Helmand, waxaana ay sheegtay inuu qeyb ka yahay howlgalka Al-khandaq, iyadoona ballanqaaday in guud ahaan muslimiinta ay la wadaagi doonto macluumaadka hadba kasoo kororta Camaliyadan weli socota.
Dowladda Maraykanka weli kama hadlin weerarka ku socda ciidamadeeda jooga Afqaanistaan, xukuumadda Kaabul-na warar is khilaafsan ayay warbaahinta siisay, oo ka hor imaanaya xaqiida taalla fagaaraha dagaalka.